Rasmi: Filimka Andhadhun oo sare u kac 50% sameeyay Isniintiisa kowaad waa arin naadir ah! – Filimside.net
Rasmi: Filimka Andhadhun oo sare u kac 50% sameeyay Isniintiisa kowaad waa arin naadir ah!
October 9, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: October 9, 2018
Ayushmann Khurrana, Tabu iyo Radhika Apte filimkooda Andhadhun ayaa sare u kac 50% sameeyay Isniintiisa kowaad marka lala bar bar dhigo ganacsigii uu sameeyay Jimcadiisa kowaad waana arin naadir ah in filim maalintiisa kowaad uu ka lacag badnaado maalintiisa labaad.
Andhadhun ayaa keenay 3.50 Crore (Trade Figure) Isniintiisa kowaad taasi oo ka dhigan mudo afar maalmood ah inuu soo xareeyay 17.85 Crore (Trade Figure) waana ganacsi heer sare ah oo muujineyso marka ay ugu yar tahay todobaadkiisa kowaad inuu keeni doono 25 Crore.
Andhadhun waa hubaal ganacsigiisa heerka sare ah inuu sii socon doono inta ka harsan todobaadkan waxaa kalsoo xiiso leh sida uu usii gadmi doono marka uu todobaadkiisa labaad guda galo filimkan guuleestay balse haatan ku socdo inuu HIT dhameestiran noqdo.
Filimka Andhadhun iyo mudo 4-maalmood ah ganacsiga uu sameeyay fadlan hoos kaga bogo waxaana soo daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 17.85 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale filimka Loveyatri ayaa 50% hoos u dhac sameeyay Isniintiisa kowaad wuxuuna keenay 1 Crore taasi oo ka dhigan mudo afar maalmood ah inuu soo xareeyay 7.75 Crore (Trade Figure).
Ayush Sharma filimkiisa kowaad waa mid guul dareestay asigoo todobaadkiisa kowaad keeni doono 10 Crore kadibna masii socon doono madaama uusan heesanin daawadayaal ku filan.
Fadlan hoos kaga bogo Loveyatri iyo mudo afar maalmood ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India:
Wadarta Guud – 7.75 Crore (Trade Figure)
Ugu dambeyntii filimka Hollywood-ka ah Venom ayaa is celiyay Isniintiisa kowaad wuxuuna keenay 2.50 Crore taasi oo ka dhigan mudo afar maalmood gudaha Hindiya inuu kasoo xareeyay 18 Crore (Trade Figure) waana ganacsi wacan.
Venom ayaa u muuqdo todobaadkiisa kowaad inuu keeni doono 24 Crore ilaa 25 Crore ganacsi u dhaxeeyo sida muuqatana filim guuleestay Average ayuu gudaha Hindiya ka noqon doonaa waa haddii todobaadkiisa labaad uu is celiyo.
Fadlan hoos kaga bogo Venom iyo mudo afar maalmood ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 18 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 405